Golaha baarlamaanka Britain oo kasoo horjeestay heshiiska Britain ay uga baxayso Midowga Yurub - Halbeeg News
Golaha baarlamaanka Britain oo kasoo horjeestay heshiiska Britain ay uga baxayso Midowga Yurub
LONDON (HALBEEG)- Rai’isul wasaaraha dalka Britain, marwo Tresa May ayaa baarlamaanka dakeeda kala kulantay guul darradii ugu weyneed abid ee xukuumadi kazoo gaarto golaha baarlamaanka dalka Britain kadib markii ay cod aqlabiyad ah kaga hor yimaadeen heshiiska Britain ay uga baxayso Midowga Yurub.
Ansixinta heshiiskan oo cod ay u qaadeen golaha baarlamaanka ayay ka hor yimaadeen 432 xildhibaan halka 202 xildhibaanna ay taageereen.
Kadib markii lagu dhawaaqay natiijada golaha ayuu hoggaamiya xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah Jermy Corbin ku baaqay in cod loo qaado kalsooni kala noqoshada xukuumadda dalkana uu u dareero doorashooyin guud walow marwo Tresa May aysan wali qaayibin guuldarradeeda madaxana ciidda ka ceshaneyso.
Guuldarrada qabsatay rai’sal wasaare May ayaa dharbaaxo xoog badan ku noqoneysa wada hadalladii muddada labada sano ah ay kula jirtay Midowga Yurub ee ay ku dooneysa in ay dalkeeda uga saarto Midowga.
Codeyntii loo qaaday heshiiska ayaa lagu soo warramayaa in 118 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ay codkooda ku biiriyeen xisbiyada mucaaradka kana soo horjeesteen qorshaha Britain looga saarayo Midowga Yurub.
Wasiirka arrimaha dibadda Britain ayaa yiri “Wixii dhacay waxay ahaayeen jab aad uga weyn wixii horay loo filayay” taasoo la macno ah in heshiiskaas oodda loo rogay.
Ururka Midowga Afrika oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday Dusit hotel ee Nairobi
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya caleema saarka Laft-gareen